Rikoooo.com - Jet Blue Airbus A-320 mega pak. Na mberede .....
Jet Blue Airbus A-320 mega pak. Na mberede .....
Jikọtara: 12 Ọgọst 2014, 00:21
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by spilok » 14 Sept 2017, 15:20
Enwere m mmasị na ụgbọ elu A-320 Mega Pak na Jet Blue na v4 maka ọnwa ole na ole ugbu a. ALL NKE SUDDEN, enweghị m ike imezi ihe ọ bụla nke 320 si na-ewepụ ngwa ngwa. Ha dị umengwụ, na-aga dị ka nduru, ọ dịghịkwa ihe m gbalịrị ka ọ na-eme ka ha na-agagharị dịka ha na-emebu. Gịnị gaara agbanwe? Enwetara m ha ma weghachite ha, mana ha na-eme otu ihe ahụ.
Kedu ihe m ga - elele iji hụ ihe kpatara ụgbọ elu umengwụ a na ụgbọ elu niile dị na paị a? Enwere m nbudata ha na Rickooo nke na-emesi obi ike na ha dị P3dv4 masịrị ya.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by spilok » 15 Sept 2017, 19:04
Echere m ya. O yiri ka enweghi m enwere obi ụtọ nke ọma kemgbe m deghariri. Enweghị m ike ịchọta ya, mgbe ahụ laghachi azụ na ntụghaghị maka nhazi. Enwere ike ịgụghachi na ike m niile ugbu a. O yiri ka a na-emezi nhazi nke otiti.
Daalụ maka ịgụ.